Ezona zixeko zikrelekrele kwihlabathi lanamhlanje
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Ezona zixeko zikrelekrele kwihlabathi lanamhlanje
Cofa apha ukuba le ngxelo yakho!
Oktobha 25, 2021
I-Smart City Expo World Congress 2021 izisa ishishini lokusungula izinto ezidolophini kwakhona
I-Smart City Expo World Congress (SCEWC), ingqungquthela yamazwe ngamazwe ekhokelayo kwizixeko kunye nezisombululo zasezidolophini ezihlakaniphile eziququzelelwe nguFira de Barcelona, ​​​​iza kuhlanganisa imboni ye-innovation yasezidolophini kwakhona kunye nomntu ukubhiyozela i-10.th isikhumbuzo sesiganeko. Ukususela ngoNovemba 16 ukuya kwi-18, kunye nababonisi abangaphezu kwama-400 kunye nezithethi ze-300, kwaye phantsi komxholo Sizizixeko esizenzayo, Umsitho uya kubonakalisa inguqu ye-metropolises emva kobhubhane kunye nesidingo sokuhlangabezana neemfuno zabemi bayo nangaphezulu kunangaphambili.
Isiganeko siya kuqokelela iingcali ezikhokelayo zamazwe ngamazwe kunye neenkampani ukwabelana ngolwazi kunye nokujongana nemingeni emininzi echaphazelekayo kwinguqu yedolophu. Ukugubungela iinkalo ezininzi ezibandakanyekayo, inkqubo yenkongolo iqulunqwe kwimixholo esibhozo, iTekhnoloji yokunika amandla, aMandla kunye nokusiNgqongileyo, ukuHamba, uLawulo, ukuPhila nokuBandakanya, uQoqosho, iZiseko zoPhuhliso kunye neZakhiwo, kunye noKhuseleko kunye noKhuseleko.
Izisombululo zasezidolophini ziyinto ebalulekileyo ye-ecosystem yesixeko esihlakaniphile, kwaye iinkampani ezibonisayo ezingama-400 ziya kubonisa iimveliso zabo zamva nje kunye nobuchwepheshe. Phakathi kwezi nkampani kukho i-Abertis Mobility Solutions, i-Cisco, i-City Possible by Mastercard, i-FCC Environment, i-Huawei, i-Microsoft, i-Motorola, i-Seat, i-Smart Ports: i-Piers of the Future kunye ne-Ubiwhere. Ngokukwanjalo, izixeko ezininzi kunye namazwe aya kubonisa iiprojekthi zamva nje ezibandakanya ezo zivela eArgentina, eOstriya, eBarcelona, ​​eBelgium, eBerlin, eBrasil, eBuenos Aires, eCanada, eChile, eKholombiya, e-Estonia, eFinland, eFransi, eJamani, eHague, eIndiya, eItali, eLatvia. , INetherlands, iNorway, iParis, iPoland, iSweden kunye ne-USA.
yena UCLG World Council
I-SCEWC iza kubonelela ngendawo yeBhunga leHlabathi loMbutho weziXeko eziManyeneyo kunye noMbutho wooRhulumente beeNgingqi (i-UCLG), intlanganiso yonyaka yothungelwano olukhulu lwehlabathi lwezixeko kunye noorhulumente basekhaya, bengingqi kunye noorhulumente beedolophu. I-UCLG iya kubuthana e-Barcelona, ​​phantsi kwesihloko esithi "Iidolophu ezihlakaniphile kunye nemimandla, iiNtsika ze-Agenda ye-Common Agenda" ukuchaza isicwangciso sombutho kamasipala kunye negalelo layo kwi-UN Common Agenda.
Ikamva lokuhamba kunye nezixhobo
I-SCEWC iya kuqinisa indima yayo njengeqonga lokwabelana ngolwazi ngokubamba imicimbi emibini emitsha: I-Tomorrow.Mobility kunye ne-PUZZLE X. Ngomso.Ukuhamba kuququzelelwe yi-EIT Urban Mobility kwaye kuya kugxininisa ekukhuthazeni ukuyila kunye nokwamkelwa kokuhamba okuzinzileyo kwedolophu. iimodeli, ngelixa i-PUZZLE X, iququzelelwe ngokudibeneyo kunye ne-Advanced Material Future Preparedness Taskforce kunye ne-Mobile World Capital Barcelona, ​​ijolise ekubambeni amandla ezinto zeFrontier ukusombulula ezinye zeengxaki uluntu olujongene nazo.